Thola Umshuwalense Wezimoto kuLwazi lwe-RealtyWW
Thola Umshuwalense Wezimoto
Imoto (noma imoto) iyimoto enamasondo esetshenziselwa ukuthutha. Izincazelo eziningi zezimoto zithi zigijima ikakhulukazi emigwaqweni, zihlala umuntu oyedwa kuya kwabayisishiyagalombili, zibe namathayi amane, futhi ikakhulukazi zithutha abantu kunezimpahla.Izimoto zaqala ukusetshenziswa emhlabeni wonke phakathi nekhulu lama-20, futhi ezomnotho ezithuthukile zincike kuzo. Unyaka we-1886 uthathwa njengonyaka wokuzalwa kwemoto yesimanjemanje lapho umsunguli wamaJalimane uKarl Benz enza igunya lakhe leBenz Patent-Motorwagen. Izimoto zatholakala kabanzi ekuqaleni kwekhulu lama-20. Enye yezimoto zokuqala ukutholakala kuzo abantu abaningi bekuyi-1908 Model T, imoto yaseMelika eyenziwe yiFord Motor Company. Izimoto zamukelwa ngokushesha e-US, lapho kwathatha khona indawo ezithwalwe yizilwane nezimoto, kodwa kwathatha isikhathi eside ukwamukelwa eNtshonalanga Yurophu nakwezinye izingxenye zomhlaba. Izimoto zinokulawula ukushayela, ukupaka, ukunethezeka kwabagibeli, kanye namalambu ahlukahlukene. Emashumini eminyaka edlule, kunezelwa ezinye izici nezilawuliwe ezimotweni, ezizenza ziba nzima ngokwengeziwe. Lokhu kufaka phakathi amakhamera okubuyela emuva, isimo somoya, izindlela zokuhamba, nokuzilibazisa okwenziwa emotweni. Izimoto eziningi ezisetshenziswayo ngonyaka we-2010 zithuthukiswa yinjini yokuhlanganisa yangaphakathi, eqhutshwa amandla omlilo ngamalangabi. Izimoto zikagesi, ezasungulwa ekuqaleni komlando wemoto, zaqala ukutholakala ngo-2008. Kunezindleko nezinzuzo zokusebenzisa izimoto. Izindleko eziya kulowo nalowo zibandakanya ukuthola imoto, izinkokhelo zenzalo (uma imoto ixhaswa ngezimali), ukulungiswa nokulungiswa, uphethiloli, ukwehla kwesikhathi sokushayela, isikhathi sokushayela, imali yokupaka, intela nomshuwalense. Izindleko zomphakathi zifaka ukugcinwa kwemigwaqo, ukusetshenziswa komhlaba, ukugcwala kwemigwaqo, ukungcoliswa komoya, impilo yomphakathi, ukunakekelwa kwempilo kanye nokulahla imoto ekugcineni kwempilo yayo. Izingozi zethrafikhi zomgwaqo ziyimbangela enkulu yokufa okuhlobene nokulimala emhlabeni jikelele.Izinzuzo zomuntu siqu zihlanganisa ukuhamba kwezidingo, ukuhamba, ukuzimela, kanye nokwenza lula. Izinzuzo zenhlalo zibandakanya izinzuzo zezomnotho, ezinjengokwakhiwa kwemisebenzi nokwakha ingcebo embonini yezimoto, ukuhlinzekwa kwezinto zokuhamba, inhlala-kahle yomphakathi kusuka ezokungcebeleka namathuba okuhamba, kanye nokukhiqizwa kwemali ngentela. Amandla abantu okuhamba ngokuguquguquka ezindaweni ngezindawo anemiphumela efinyelela kude kuhlobo lwemiphakathi. Kukhona cishe izimoto eziyizigidi eziyinkulungwane ezisetshenziswa emhlabeni jikelele. Amanani akhula ngokushesha okukhulu, ikakhulukazi eChina, eNdiya nakwamanye amazwe asanda kuthuthuka.
Umshuwalense uyindlela yokuvikelwa ekulahlekelweni yimali. Kuyindlela yokulawulwa kwezingozi, esetshenziselwa ukubopha umngcele wobungozi bokulahleka okuphikisanayo noma okungaqinisekile Inhlangano enikezela ngomshuwalense yaziwa njengomvikeli womshuwalense, inkampani yomshuwalense, ophethe umshwalense noma ongaphansi. Umuntu noma ibhizinisi elithenga umshwalense laziwa njengomvikeli noma njengomnikazi wenqubomgomo. Ukuthengiselana komshuwalense kufaka phakathi ukuthola umshuwalense uthatha ukulahleka okuqinisekisiwe nokwaziwa okuncane ngendlela yokukhokha kumshuwalense ukuze athembise isithembiso somshuwalense sokunxephezela umshuwalense uma kwenzeka elahlekelwe. Ukulahleka kungenzeka noma kungabi ngokwezezimali, kepha kufanele kuncishiswe kumigomo yezezimali, futhi kuvame ukubandakanya okuthile lapho i-insured inenzalo engalapheki esekwe ubunikazi, ubunikazi, noma ubudlelwane obukhona ngaphambili. Umshuwalense uthola inkontileka, ebizwa ngokuthi inqubomgomo yomshuwalense, echaza imibandela nezimo lapho umshuwalense ezonxephezela ngalo umshuwalense. Inani lemali elikhokhwa ngumshuwalense kuMnikazi Wepholisi wokumboza okubekwe kunqubomgomo yomshuwalense libizwa ngokuthi yi-premium. Uma umshuwalense uthola ukulahleka okungase kumbozwe inqubomgomo yomshuwalense, umshuwalense uhambisa isimangalo kumhlinzeki womshuwalense ukuze sicutshungulwe yisimangalo sesimangalo. Umshuwalense angafaka ubungozi bakhe ngokuthatha i-reinsurance, lapho enye inkampani yomshuwalense ivuma ukuthwala ubungozi, ikakhulukazi uma umshuwalense oyinhloko ebona ubungozi obukhulu kakhulu ukuthi bungabuthwala.